Dinika faharoa momba ny IEM :: Miezaka mandresy lahatra an’ireo mpamatsy vola ny Praiminisitra • AoRaha
Dinika faharoa momba ny IEM Miezaka mandresy lahatra an’ireo mpamatsy vola ny Praiminisitra
Tsy mety mitovy ny tadin-dokanga. Mitohy ny fifandresen-dahatra eo amin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara sy ny fitondram-panjakana eo amin’ny fanorenana fotodrafitrasa eto amintsika. Amin’ny ankilany, efa voafetra ao anatin’ny tetibolan’ireto mpamatsy vola ireto ny famatsiam-bola sy ireo fotodrafitrasa tokony hataon’izy ireo eto Madagasikara.
Tsy mifanaraka tanteraka amin’ny vina sy ny velirano tian’ny Filohan’ny Repoblika hotanterahina anefa izany, raha ny voalaza. Nisy ny fampahafantarana tamin’izy ireo ny drafitra napetraka hoentina mampandroso ny firenena miorina amin’ny vinam-pampandrosoan’ny Filoha Rajoelina Andry. “Miisa telo ambin’ny folo izy ireo ary efa voafaritra ao anatin’ireo veliranon’ny Filohan’ny Repoblika”, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny Fiadidiana ny Praiminisitra.
Araka izany, mbola tsy mitovy ny tadin-dokanga eo amin’ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara eo amin’ny fanoritsoritana ny fanatanterahana an’ireo vinam-pampandrosoana tokony hotanterahana eto an-toerana. Niaiky ny Praiminisitra fa: “mila fakan-kevitra amin’ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo mpisehatra rehetra miantoka ny fampandrosoana eto amintsika ny famariparitana an’ireo vinan’ny Filohan’ny Repoblika ireo”.
Miankina amin’ny Filoha
Ny Filohan’ny Repoblika ihany anefa no tompon’ny teny farany amin’izany, araka ny tohan-kevitry ny lehiben’ny governemanta, taorian’ity fihaonana manokana teny Mahazoarivo ity. Nambaran’ny Praiminisitra, Ntsay Christian fa: “ao anatin’ny fandrafetana ny tetibolam-panjakana 2020 ny governemanta amin’izao fotoana izao”. “Miankina tanteraka amin’ny fandaharanasam-pampandrosoan’ny Filoha anefa izany”, hoy ny Praiminisitra taorian’ity fihaonana ity.
Mbola ho adihevitra be, araka izany, ny hisian’ny marimaritra iraisana eo amin’ny Filoha Rajoelina Andry sy ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara. Hatreto anefa, hiantoka manontolo an’ireo fanorenana fotodrafitrasa goavana hatao eto amintsika ny famatsiam-bola avy amin’ireo firenen-dehibe, mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara.
Fahamehana ara-pahasalamana Hihiboka tanteraka ny faritra Atsinanana
Baolina lavalava Foana avokoa ireo fifaninanan’ ny Rugby Afrika
Hivory miaraka amin’ireo mpandraharaha ny fanjakana
Fitaterana eto an-drenivohitra Havadika nomerika ny taratasy fahazoan-dalan’ny fiarakaretsaka
Famatsian’ny Jirama :: Mikononkonona fitokonana ireo faritra sahirana amin’ny tsy fahazoana rano
Fiainana mpanakanto :: Manam-paniriana ny hihoatra ireo mpanakanto kalaza ity tovovavy
Fihomboan’ny covod-19 Olona telo matin’ny coronavirus tany Toamasina
Fahafatesana dokotera Profesora iray voatazon’ny Zandarimaria
Fitazonana an-tsokosoko Tovolahy migadra noho ny fanafenany ny sakaizany
Fitsaboana coronavirus Raikitra ny fampiasana ny tsindrona Covid-organics (CVO)